VB Insight: လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်စျေးသက်သက်သာသာ၊ Real-World Reports | Martech Zone
Bryant Tutterow သည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းများစွာကိုသူတို့၏အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများကို ဦး ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကြော်ငြာအပါအ ၀ င်အကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရေးကိုအထူးစိတ် ၀ င်စားသည်။ Bryant မှကူညီနေကြောင်းကြေငြာရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် DK New Media ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အတူကမြှင့်တင်ရေးစွမ်းရည်များ!
Bryant အားကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုဆက်လက်ပေးအပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာရောင်းချသူရှာဖွေသည့်အတိုင်ပင်ခံဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအများစုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာနယ်ပယ်တွင်သင့်လျော်သောအဖြေတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များမရှိကြပါ။ မကောင်းသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတွင် ၆ ခုမှ ၇ ခုအထိရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည်ကုမ္ပဏီသန်းပေါင်းများစွာကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ သိုမဟုတ်သိုလှောင်ထားသည့်နံပါတ်များပျောက်ဆုံးခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုသေစေနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် Bryant ၏တိုင်ကြားချက်သည်လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်မလွယ်ကူခြင်းကြောင့်သူတို့၏အစီရင်ခံစာများသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမျှတစေရန်အလွန်စျေးကြီးလွန်းသည်။ အချက်ဖြစ်ရပ်မှာဖော်ပြထားသည့်မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာဖြစ်သည် အမှတ်တံဆိပ်များသည် Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ငွေဖြုန်းတီးနေကြသည် - Forrester မှဒေါ်လာ ၄၉၉ မှရရှိသောအစီရင်ခံစာသည် Bryant မှသူကြိုးစားလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ ယ်လိုအားနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးတက်စေရန်အောင်မြင်စွာအသုံးချခဲ့သည့်နည်းဗျူဟာတိုင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြသည်။ လူမှုရေးအရဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်း အွန်လိုင်း။
Bryant ရဲ့အဖြေမှာအခုရှိနေပြီ VB ထိုးထွင်းသိမြင်မှု!
VB Insight ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း
နှင့်ကြီးစွာသောဆက်ဆံရေးမှတဆင့် မှ Ian ClearyVentureBeat မှ Stewart Rogers နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ Stewart Rogers သည် VentureBeat မှထုတ်ကုန်ဖြစ်သော VB Insight မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူသည် Martech လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်သူတို့၏လေ့လာမှုများနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုတင်ပြရန်ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသောစာရေးဆရာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ VB ထိုးထွင်းသိမြင်မှု VB ၏အဓိကသုတေသနအတွက်ကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုနေသည့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်သူများကရေးသားထားသောမယုံနိုင်လောက်အောင်နှင့်တတ်နိုင်သောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
Stewart ကကျွန်တော့်ကိုလေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။ ငါဘို့ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံး Analyst အစီရင်ခံစာကိုရေးဆွဲစတင်ခဲ့သည် VB ထိုးထွင်းသိမြင်မှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းများ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှုဆောင်များအတွက်ရေးသားထားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization စက်မှုလုပ်ငန်း၏အခြေအနေအပေါ်။ ကျနော်တို့ကဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းတွင်အတွက်ပြီးစီးရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
သင်၏ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာကို ၅၀% လျှော့စျေးဝယ်ယူပါ။
Stewart သည်မကြာသေးမီကဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုအွန်လိုင်းတိုင်ကြားသူများ၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုထိရောက်စွာရောင်း ၀ ယ်နေစဉ်ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လူမှုမီဒီယာ၏အားသာချက်ကိုမည်သို့ရယူနေသည်ဟူသောအချက်များနှင့်အတူစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအချက်အလက်များနှင့်အတူရေးသားခဲ့သည်။
ဒီဂျစ်တယ်ကွင်းများ - ဆိုရှယ်မီဒီယာတိုင်ကြားချက်များကိုအမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း.
Martech Zone စာဖတ်သူများသည် ၄ ​​င်း၏စာရင်းစျေးနှုန်း၏ ၅၀% နှုန်းဖြင့်အစီရင်ခံစာကို ၀ ယ်ရန်အောက်ပါပုံကို နှိပ်၍ ကြည့်နိုင်သည်။
[su_button url = "http://bit.ly/audpcs50″ ပစ်မှတ် =" အလွတ် "အရောင် =" # ffffff "] 50% Off များအတွက်အစီရင်ခံစာ Buy! [/ su_button]
Tags: လေ့လာဆန်းစစ်သူလေ့လာဆန်းစစ်သူကတင်ပြထားပါတယ်bryant tutterowတကယian ရှင်းလင်းချက်Stewart Rogersvbဟုတ်ပါတယ်